Xisbul Islaam Garabka Axmed Madoobe iyo xukuumada ridada uu hogaamiyo murtad shariif ah oo Heshiis Midnimo ah ku gaaray Wadanka Kenya (Warbixin faah faahsan). | Halganka Online
Xisbul Islaam Garabka Axmed Madoobe iyo xukuumada ridada uu hogaamiyo murtad shariif ah oo Heshiis Midnimo ah ku gaaray Wadanka Kenya (Warbixin faah faahsan).
Sarkaal sare oo ka tirsan Ururka Xisbul Islaam garabka Jubbooyinka ayaa heshiis buuxa lagaaray Dowlada KMG ah iyo Dowladda Kenya heshiiskaas oo ka dhan ah Shabaabul Mujaahidiin.
Dowladda KMG ah iyo Xisbul Islaam Faraca Jubbooyinka ayaa gaaray heshiis Mabda’i ah oo ay ku midoobayaan si ay dagaal ula galaan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo labada dhinac cadaw la ah.
Shabakadda Aljazeera ayaa baahisay war sir ah oo sheegaya in ay Kenya ku heshiiyeen sedax dhinac oo isku xulufo ah kuwaasi oo dagaal kula jira xoogaga islaamiyiinta Soomaaliya.
Aljazeera.Net waxay heshay xog muhiim ah oo ku aadan heshiiska dhaxmaray DKMG ah iyo garab Xisbul islaam ka tirsan waxaana heshiiskaas fulintiisa leh Dowladda Kenya oo cadaawad u haysa Shabaabul Mujaahidiin.
Heshiiskan oo ka dhacay gudaha Kenya ayaawaxaa dhanka Dowlada kMG ah u saxiixay Max’med Cabdi Gaandi oo ay Al Jazeera ku sheegtay wasiirka Howlaha Guud balse ah wasiirka Cirka iyo dhulka halka Xisbul Islaam Jubbooyinka uu u saxiixay Axmed Madoobe.
Bunuudda ay labada daraf ku heshiiyeen ayaa ah qodobo u muuqday in si fiican looga soo shaqeeyay marka loo eego Ahdaafta laga leeyahay waxaana laga dha dhansan karaa in gacma shisheeye ay heshiiska wax ka diyaariyeen.
Xaglaha ay labada dhinac Ku Heshiiyeen.
1-In lamideeyo Ciidanka DKMG ah ee Kenya lagu soo Tababaray iyo dagaalyahanada Xisbul islaam Jubbooyinka.
2-In Al Shabaab loo Ictibaariyo cadaw labada dhinac ka simanyihiin.
3-In si midaysan Jubbooyinka loo xoreeyo!
4-In ladhiso Idaaro ay ku midaysanyihiin beelaha Soomalida oo Jubbooyinka loola jeedo.
5-In la ilaaliyo Deris wanaaga lalaleeyahay Dowlada Kenya.
Qodobadaasi ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii ay ku heshiiyeen Xisbul Islaam Jubbooyinka iyo DKMG ah oo looga fadhiyo in ay dagaal uga saaraan Jubbooyinka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Ilo wareedyo Kenya laga helay ayaa xaqiijinaysa in Kenya loo qudbiyay Nuqul kamid ah waxyaabihii ay labada dhinac ku heshiiyeen, ila wareedkan Kenyanka ah wuxuu sheegayaa in labada dhinac ay sharci ahaan diyaarinayaan talaabo Melleteri oo Mushtarik ah oo shabaabul Mujaahidiin ka dhan ah.
Sarkaal ka tirsan DKMG ah oo Kenya ku sugan ayaa yiri “Dagaalyahanada Axmed Madoobe qayb ahaan hadda waxay ka tirsanyihiin ciidankeena iyo olalaha ka dhanka ah ee Shabaab jubbooyinka”.
Wasiirka gaadiidka Cirka iyo Dhulka Max’med Gaandi iyo Axmed Madoobe ayaa kawada tirsan Beesha Ogaadeen oo lagu tiriyo in ay tahay beesha ugu badan ee degtoaJubbada fog ee Soomaaliya.
Heshiiskan Mabda’iga ah ayaa imaanaya xilli Xisbul Islaam Jubbooyinka ay sheegeen in ay laba laabeen dagaalada ka dhanka ah Shabaabul Mujaahidiin.
Laakin Aljazeera waxay leedahay dagaalyahano badan oo kat irsan Xisbul islaam ayaa diidan heshiiska Axmed Madoobe lagalay Dowlada kMG ah waxaana dhawaan deegaanka Beerxaani duleedka Kismaayo iska dhiibay 30 Maleeshiyaad ah oo ka soo carooday Axmed Madoobe Maleeshiyaadkaasi Shabaab ayay Hubkii ay wateen ku wareejiyeen.
Kenya ayaa DKMG ah iyo Axmed Madoobe oo midaysan siinaysa gaadiid Dagaal,Dabaabaad,Tanagiyo iyo Gaadiid Gaashaaman oo ay uga qayb qaataan Howlgalka ka dhanka ah Shabaabul Mujaahidiin.
Maleeshiyaadka lagu soo Tababaray Kenya ayaa isku khilaafsan heshiiska lala galay Axmed Madoobe iyo xulufadiisa, C/laahi Sheykh Ismaaciil Fartaag oo ka tirsan saraakiisha kMG ah ee Kenya ku sugan ayaa Al Jazeera u sheegay in uu kas oo horjeedo heshiiskaasi oo uu sheegay in Isbahaysigaasi uu yahay mid beeleed oo ladoonayo in lagu qaybsado maamulka iyo maalka Kismaayo isaguna uu ka dhanyahay.
Fartaag oo hadalkiisa sii wata wuxuu Jazeera u sheegay in 19 katirsan ciidankii DKMG ah loogu tababaray Kenya ay ku Biireen Maleeshiyaadka Barre Hiiraale ee Doolow ku sugan ka dib markii ay soo caroodeen.
Weli wax war ah kama soo bixin Xisbul Islaam oo ku aadan Midnimada uu Axmed Madoobe lagaaray DKM ah iyo Kenya, dagaal oogaha caanka ah ee Barre Hiiraan ayaan isna waafaqsanayn qorshahaas oo uu qaab beeleed u diidanyahay wuxuuna doonayaa in uu Kismaayo ku qabsado gacmaha Itoobiya.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa in badan ku celisay in aysan dagaal kula jirin Xisbul Islaam balse ay dagaal lagaleen Hogaamiye Axmed Madoobe oo Ashahaadda ladirir ah.
Sheykh Xasan Daahir Aweys ayaa isna sheegay in Axmed Madoobe uu yahay Hogaamiye Ururkooda ka mid ah taas oo meesha ka saaraysay sheegashada Shabaabul Mujaahidiin ee ah in Axmed Madoobe uusan Xisbiga kamid ahayn.
« Waxgarad iyo culimo ka soo jeeda degmada Caabud Waaq oo Baaq iyo digniin u diray Beesha degmadaasi degta ka dib markii Qabuuriyiintu halkaasi dhaq dhaqaaqyo ka bilaabeen. Goor dhaw kala soco war laliska halganka.wordpress.com ducoment cadeenaya hishiiska uu la galay ururka xisbul islam garabka axmed madoobe iyo xukuumada ridada iyo ducoment kale! »